Kachasị Mpaghara Laser Marking Machine BL-WA30A Manufacturer and Factory | Boln
1.5-axis usoro, ike nke PC na-achịkwa ma na-achịkwa ya, maka akara akụkụ nke ụdị na nha na / ma ọ bụ pallets nwere ọtụtụ ihe;
3. XYZ axes system na isi nke o di na ya, ma nke eji igwe mechie ya, mee ka akuku nile nke ihe nrịba ama di ike. Enweghi mmerụ ahụ nke axis Z n'oge ngagharị nke axis X, ma ọ bụ slants n'oge ngagharị nke axis Y;
4.Axis X (strok 1200mm), axis Y (stroke 800mm), na-eme ka o kwe omume ilekwasị anya na akara mpaghara 1200mmx500mm. Axis z (strok 200mm) nwere ike akara isiokwu dị iche iche n'ịdị elu. Ọzọkwa, a pụrụ ịgbanwe isi laser n'isi na-akpaghị aka dịka ọkwa ngwaahịa dị iche iche si dị.
5.Customized marking software na-mepụtara dabere na ahịa chọrọ na ike nweta nkwalite free maka ndụ, na pụrụ iche ndudue proofing technology, na-ezere imekwa na-efu marking, huu marking àgwà. Sọftụwia anyị nwere ike ijikọ ọnụ na nchekwa data ndị ahịa yana iwepụta ozi imepụta ihe.
Nke gara aga: Nameplate Laser akara Machine BL-PFP30A